Tọgharịa Network Ntọala iPhone: Olee-tos na Nchọpụta nsogbu
Na-eji iPhone i nwere ike na-enwe nsogbu na netwọk gị Njikọta dị ka ị na-apụghị jikọọ gị iPhone ka WiFi netwọk, ị nwere ike ime ka ma ọ bụ inweta oku ọbụna gị iPhone nwere ike na-enweghị ọrụ. Ị nwere ike iji aka gị iPhone ka ahịa ka tech support. Ma i nwere ike idozi nsogbu ndị a site onwe unu. iPhone nwere 6 nrụpụta nhọrọ troubleshoot dị iche iche nke nsogbu. Site na iji Tọgharia Network Ntọala, irè nhọrọ dozie netwọk metụtara mbipụta, ị nwere ike idozi nsogbu nile a nanị site resetting netwọk ntọala gị iPhone dị ka ọ ga ikpochapụ niile netwọk ntọala, ugbu a cellular netwọk ntọala, zọpụta Wi-Fi netwọk ntọala, Wi-Fi okwuntughe, na Okwey ntọala na akpọghachite ndị gị iPhone Network Ntọala ụlọ ọrụ ndabara. Isiokwu a na-ekpuchi 2 mfe akụkụ:
Part 1. Nzọụkwụ na-nzọụkwụ nkuzi maka otú iji tọgharịa iPhone Network Ntọala
Part 2. Troubleshotting: iPhone Network-adịghị arụ ọrụ
Part 1. Olee iji tọgharịa iPhone Network Ntọala
Mgbe ị na-ahụ na netwọk na gị iPhone ịkwụsị ọrụ, mgbe ahụ nnọọ ihe mbụ i kwesịrị ime bụ iji tọgharịa netwọk ntọala na iPhone. Site resetting iPhone netwọk, nsogbu nwere ike ga-edozi susscessfuly. Na ọ dịghị achọ gị ihe ọ bụla usoro ime resetting, ma 4 mfe nzọụkwụ. Na-enwe ndidi. Ọ ga-ewe otu ma ọ bụ nkeji abụọ mezue ọrụ. Mgbe ahụ iPhone ga-reboot na ndabere netwọk ntọala.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala ngwa gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ General.
Nzọụkwụ 3. gbadaa na chọta Tọgharia na enweta ya.
Nzọụkwụ 4. Na ọhụrụ window, họrọ Tọgharia IZIRỊTA Ntọala na akwado edinam.
Mgbe ụfọdụ ọbụna na ezie na ị adịghị agbanwe agbanwe ọ bụla na ntọala gị na iPhone, netwọk nwere ike ọ gaghị na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ na-eme, na-adịghị-gị iPhone ozugbo na a Obodo idozi ụlọ ahịa, n'ihi na i nwere ike idozi ya site onwe gị. N'okpuru bụ ụfọdụ Atụmatụ na usoro maka esi mee ka ọ na-arụ ọrụ mgbe gị iPhone netwọk ịkwụsị ọrụ.
* Wi-Fi na-adịghị arụ ọrụ:
A ezi ọnụ ọgụgụ nke iPhone ọrụ na-eche ihu ihe isi ike na Wi-Fi Njikọta mgbe upgrading ka ọhụrụ iOS 9.0 n'aka ndị okenye iOS version. Ndị na-arụnyere ọhụrụ iOS nwekwara ihu otu nsogbu kwa. Ọ bụrụ na ọ na-eme, na-eso n'elu kwuru banyere iji tọgharịa netwọk na ntọala gị na iPhone na ahụ na-agbalị jikọọ na Wi-Fi ọzọ.
* Ike jikọọ iPhone a kpọmkwem Wi-Fi netwọk:
Ọ bụrụ na ị na-eche ihu nsogbu ejikọta a kpọmkwem Wi-Fi netwọk mgbe ahụ mbụ họrọ na netwọk si ndepụta na pịa echefu. Mgbe ahụ chọọ ihe na netwọk. Tinye netwọk paswọọdụ ma ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na nsogbu dị mgbe ahụ, na-eme a Tọgharia Network Ntọala. Mgbe ịgbanyụ iPhone, jikọọ na netwọk Wi-Fi.
* Ịchọ netwọk ma ọ bụ ọ ọrụ:
Mgbe ụfọdụ iPhone na-ewe ogologo oge ịchọ a netwọk ma ọ bụ mgbe ụfọdụ na-enweghị ọrụ. Iji dozie nsogbu a mbụ gbanye ụgbọelu mode na mgbe ahụ gbanyụọ ya mgbe a sekọnd ole na ole. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị dozie nsogbu ahụ ịrụ "Tọgharia Network Ntọala." Resetting netwọk na ntọala ga n'ezie idozi "Ọ dịghị Service" nke.
* Ike ka ma ọ bụ inweta oku:
Mgbe ụfọdụ iPhone ọrụ ike na-eme ma ọ bụ na-enweta oku na ha iPhone. Ọ na-eme mgbe ụgbọelu mode mmadụ na mberede agbanwuru. Agbanye ya nke ga-idozi nsogbu. Ma ọ bụrụ na ụgbọelu mode anaghị eme ka nsogbu a reboot nwere ike dozie nsogbu. Ọ bụrụ na nsogbu dị mgbe ahụ ịrụ "Tọgharia Network Ntọala" na ọ ga-edozi nsogbu ahụ.
* IMassage-adịghị arụ ọrụ:
Ụfọdụ na-ekwu iMassage-adịghị arụ ọrụ na ọbụna ọ na-adịghị ka ha gbanyụọ ya. Ya mere, ha tọgharịa netwọk ntọala idozi nsogbu na iPhone araparawo ọkara ụzọ booting ruo ọtụtụ awa. Iji dozie nsogbu na ngwa dị ka iMassage ime a ike nrụpụta site na-ahọpụta Tọgharia All Setting na nrụpụta menu kama eme Tọgharia Network Ntọala.
* Ntọala ma ọ bụ iOS anaghị azaghachi:
Mgbe ụfọdụ, ndị Setting menu anaghị azaghachi nakwa dị ka zuru ezu iOS. A ike nrụpụta nwere ike idozi nsogbu ahụ. Ị pụrụ ime otú site na ịga na Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa nile Ntọala> Tọgharia ha niile Ntọala.
* IPhone-apụghị synced:
Mgbe ụfọdụ iPhone ọrụ-enwe nsogbu na ha na kọmputa. Ọ na-egosi a ịdọ aka ná ntị na iPhone apụghị mmekọrịta ruru ka njikọ na iPhone e tọgharịa. "A Tọgharia Network Ntọala na iPhone na kọmputa reboot ga-edozi nsogbu ahụ.
Atụmatụ maka syncing iPhone na otutu Computers
> Resource> iPhone> otú iji tọgharịa Network Ntọala On iPhone na Atụmatụ & Aghụghọ